MX Linux: Dhibaato deg deg ah, saaxiibtinimo leh qalab yaab leh | Laga soo bilaabo Linux
Midowgii antiX iyo bulshooyinkii hore MEPIS, MX Linux aad u layaab badan ayaa dhashay https://mxlinux.org/, kaas oo ku hawlan aaladaha iyo tayada ugu wanaagsan ee distro kasta, oo ku saleysan Debian xasilloon. Waa nidaam qalliin oo dhexdhexaad ah, oo loogu talagalay in lagu daro miis fudud oo fudud oo fudud sida XFCE oo leh qaabeyn fudud, xasillooni sare, iyo waxqabad adag.
Waxaa xusid mudan, in kastoo qaybintaan ay ku saleysan tahay Debian, wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyadda Sysvinit beddelaya kuwa ugu casrisan systemd, wax in badan oo ka mid ahi faa'iido weyn u noqdaan. Sidoo kale, ku mahadsanid xasilloonideeda sare, qalooca waxbarashada fudud, bulsho ballaadhan, iyo muuqaal wanaagsan, MX Linux waxaa loo soo bandhigay nidaam aan dhib lahayn oo loogu talagalay dhammaan noocyada isticmaaleyaasha.
Kooxda MX Linux Wuxuu horeyba uga shaqeynayay noocyada kaladuwan ee walaashiisa mudo 3 sano ah, kii ugu dambeeyay ee yimid wuxuu ahaa MX-16 “Metamorphosis”, taas oo aan tijaabinay waxaanan kuu keenaynaa astaamaheeda
1 Waa maxay MX-16 «Metamorphosis»?
2 Astaamaha MX-16 «Metamorphosis»
2.1 Waxqabadka MX-16 «Metamorphosis»
2.2 MX-16 «Metamorphosis» codsiyada
3 Soo dejiso MX-16 «Metamorphosis»
4 Gunaanad MX Linux 16 «Metamorphosis»
Waa maxay MX-16 «Metamorphosis»?
Waa noocii ugu dambeeyay ee MX Linux distro, oo loogu talagalay ujeedka inuu noqdo distro khafiif ah, waxay ku saleysan tahay Debian 8.6 'Jessie', iyadoo la isku darayo astaamaha noocyada kala duwan ee antiX ee loo yaqaan 'Xfce 4.12.2 desktop desktop'. ., Waxaa intaa dheer in lagu qalabeeyay Linux kernel 3.16 oo loogu talagalay nooca 32-bit iyo Linux kernel 4.7.0 oo loogu talagalay nooca 64-bit.
MX-16 «Metamorphosis» qayb ka mid ah salka nidaamka Anti-X waxaana ka mid ah shaqada iyo fikradaha uu u adeegsaday Warren Woodford isaga Mashruuca MEPIS. Intaas waxaa sii dheer, waxay ka mid yihiin Warqadaha Dib-u-habeynta iyo wixii ku soo kordha dibedda Repos si loo ilaaliyo qaybaha horumarka.
Distro-kani wuxuu leeyahay iswaafajin rakibidda UEFI iyo sidoo kale rakibaye darawal heer sare ah
MX-16 maareeyaha faylka
MX Linux rakibayo
Ogeysiiska MX Apt
Astaamaha MX-16 «Metamorphosis»
Waa distro deggan, fududahay in la rakibo, oo leh aqoonsi qalab aad u fiican iyo qaabeyn otomaatig ah nooc kasta oo isticmaale ah.
Muuqaalka muuqaalka qaybintaani waa mid muxaafid ah, maaddaama horumariyeyaasheedu ay doorbideen xasilloonida iyo waxqabadka tayada garaafyada, laakiin tan si fudud ayaa loo horumarin karaa iyadoo la adeegsanayo xfce habeynta.
Waxay leedahay suurtagalnimada in lagu dhejiyo dariiqyada qaab sahlan, waxay u oggolaaneysaa firfircoonida dhawaaqyada dhacdooyinka waxayna leedahay buug adeegsi oo dhameystiran Si la mid ah, waxay ku imaaneysaa suurtagalnimada in lagu tijaabiyo sida LiveUSB oo leh adkeysi firfircoon.
Isticmaalayaasha AMD, Nvidia, iyo Broadcom Wi-Fi chips waa inay si fudud u nastaan, maxaa yeelay xoogaa dadaal ah ayaa loo galay isdhexgalka rakibayaasha buuxiya baahiyaha qalabkaas.
Waxqabadka MX-16 «Metamorphosis»
Isku darka guud ee MX-16 ee mashiin dalwaddii wata oo leh 2gb Ram wuxuu ahaa 26 ilbiriqsi. Sida laga soo xigtay HTOP, isticmaalka xusuusta ayaa waxoogaa ka hooseeya distro sida Xubuntu oo sidoo kale ka muuqda desktop-ka XFCE. Nidaamka bilowgu waa mid dhakhso badan sida loo xidho. Sidaa darteed qaybtaan ma jirto wax dambe oo la dhaho.
MX-16 «Metamorphosis» codsiyada
Codsiyada ugu muhiimsan ee ay na siiso hawo waa kuwan soo socda:
Ciyaaryahan fiidiyoow: VLC 2.2.4
Maareeyaha Muusikada / Ciyaaryahanka: Clementine 1.3.1
Macmiilka Boostada: Thunderbird 45.5.1
Qalabaynta xafiiska: LibreOffice 5.2.2
Gadaal: LuckyBackup 0.4.8
Amniga: Furaha sirta ah iyo furayaasha 3.14.0
Terminal: Terminalka Xfce4 0.6.2
Si la mid ah, waxay ku timid qalabaynta barnaamijyadan kale:
Toos ah: Abuur Live Live, Qalabka Remaster, Snapshot.
Dayactirka: Dayactirka kabaha, Maamulaha Flash, Tifatiraha Menu, Maamulaha isticmaalaha.
Rakibayaasha iyo Maareeyayaasha Barnaamijka: Maamulaha Broadcom, rakibayaasha Koodhadhka, Muuqaalka ugu dambeeya, Jihaynta Guddi, Xul codka, Codadka nidaamka, Soo dhawaynta, ogeysiiyaha Apt, Hubinta Apt GPG, Debian rakibayaasha Debian, Rakibidda xirmada, Maamulaha Repo, Imtixaanka Repo rakibiyaha
Adeegyada: Raadi saamiyada, Beddelaha isticmaalaha, unmounter USB.
Barnaamijyada Carruurta: Dugsiga barbaarinta, Dugsiga Hoose, iwm.
Sawirro: ImageMagik, Inkscape, iwm
Shabakad: Skype, Dropbox, iwm.
Qalabka otomaatiga: GnuCash, Adobe Reader, Caliber, iwm.
Nidaamka: KDE, LXDE, MATE, iwm
Audio: Maqalka, DeaDBeeF, Pithos, iwm.
Video: DVDStyler, MPlayer, OpenShot, iwm.
Soo dejiso MX-16 «Metamorphosis»
Waxaad kala soo bixi kartaa MX-16 ISO-yada labadaba 32-bit iyo 64-bit halkan. Waxaa lagu duubi karaa CD / DVD ama USB.
Haddii aadan aqoon sida loo gubo ISO-gaaga kumbuyuutarka waxaan kugula talineynaa qodobkaan Abuur LiveUSB oo leh terminal
Gunaanad MX Linux 16 "Metamorphosis"
Shakhsi ahaan, waxaan ku arkaa tan 'disro' muuqaal ahaan raalli ka ah, oo waxtar leh iyo qalab xiiso leh. Waxaan ku faraxsanahay inaan haysto beddel ka baxsan nidaamsan, laakiin waxaan u xiisay in aanan haysan qaar ka mid ah codsiyada oo aad u cusbooneysiiya marka la isticmaalayo Debian (xasilloon), in kasta oo ay mudan tahay in la ogaado in ugu yaraan biraawsarka iyo LibreOffice haddii ay arrintu cusboonaysiinayaan.
Sidoo kale, waxay leedahay taxane ah Qalabka MX Way mudan yihiin in la isku dayo, iyo rakibaaddooda aadka u yar ee naxdinta leh ayaa iga dhigeysa inaan ku daro dhibco badan nooc kasta oo qiimeyn ah.
Gabagabada, hadaad mid rabto wax fudud laakiin qaybinta Linux aad u shaqeynaya Waan kugula talinayaa tijaabi MX Linux 16. Waxqabadka si fudud waa cajiib oo muuqaal ahaan waa qurux iyo hufnaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » MX Linux: Dhibaato deg deg ah, saaxiibtinimo leh qalab yaab leh
Qaybinta cajiibka ah, waxaan la joogay muddo toddobaad ah waana ku faraxsanahay, xawaare sare leh oo la maamuli karaa.
Gebi ahaanba lagu talin karo
La yaab leh oo aad u qanacsan, si aad ah ayaa loogu taliyay gaar ahaan 64 bit sababtoo ah xuddunta uu isticmaalo, maaddaama 32-ka ay adeegsanayaan xudunta 3.16, oo dhibaato ku leh Bluetooth. Distro fiican
Waa noocii ugu horreeyay ee 32 qayb ah ee isticmaalka guud loo qaybiyo oo si toos ah loogu daro kernel aan-ahayn PAE. Taas oo kaliya waxay iga mudan tahay ixtiraam iyo in si fiican loo tijaabiyo.
Ku jawaab Cornapecha
Ma garanayo waxa aan khalday, waxaan ku rakibay nooca 32 bit qaabka uefi, taas oo ah mida laptop-ka uu taageero, rakibaadiina waa la dhameystiray laakiin markii la bilaabayay ma aysan rarin nidaamka qalliinka, waxay ku sii jirtaa xarfaha huruudda ah
Ku jawaab Lobo®
Lobo laga yaabee inaad ku sameyso labada ikhtiyaar Waxaan u maleynayaa marka aad sameyso sawirka inuu ku siinayo ikhtiyaar aad ku dooran karto uefi ama labada noocba. Wax kastoo 32 ama 64, mabda 'ahaan, wax macno ah malahan, waqtiga bootka iyo rakibidda, waxay yeelan kartaa muhiimadda goor dambe marka la isticmaalayo ilo badan ama ka yar.
Waxaan isku dayay nooca 32-da ah waxayna ka martay dhamaan 4-ta AMD Phenom X4 CPUs si khaldan oo nidaamka u burburaya; ka dib waxaan rakibay nooca 64-bit waxaanan helay nidaam si sax ah u shaqeeya, oo xitaa aad uga fiicnaan kara xubinta, iyo lint mint mint xfce, oo aan aad u jeclahay linuxero; marka la soo koobo, qalab kasta waa duni.
Jawaab ku sii Rafael González